‘मलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्नु नै कांग्रेसलाई जिताउने सजिलो बाटो हो’ - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
रामचन्द्र पौडेल भन्छन्: गोविन्दराज जोशीले सहयोग गर्नुको विकल्प छैन
माधव धिताल काठमाडौं कार्तिक २८
नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल २०४८ सालदेखि निरन्तर संसद र संविधान सभामा छन्। मंसिर २१ मा दोस्रो चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उनी तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बनेका छन्। कांग्रेसकै नेता गोविन्दराज जोशीले उम्मेदवारी दिएपछि तनावमा देखिएका थिए पौडेल। तर, निर्वाचन आयोगले जोशीको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएपछि भने अझ उत्साहित भएका छन्।
पौडेल २०४८ सालमा पहिलो पटक सांसदमा विजयी भएका पौडेल त्यसपछि भने लगातार तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ बाट चुनाव लड्दै आएको थिए। तर, यो पटक २६ वर्षपछि पुरानै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा फर्किएका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रको वामगठबन्धनले कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई पौडेलविरुद्ध उठाएको छ। तर, पौडेल भने सधै तनहुँमा कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्दै आएकाले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको बताउँछन्।
‘हामी सधै एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिदै आएका छौं। कम्युनिष्ट दलहरु चुनावमा एक भएर लड्छन्। तर, त्यसले हामीलाई केही फरक पर्दैन। मेरो जित सुनिश्चित छ,’ पौडेल भन्छन्। चुनावका विषयमा केन्द्रीत रहेर गरिएको कुराकानीः
महामन्त्री शशांक कोइरालाले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा तपार्इंको नामपनि लिनु भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न दिनुहोला त?
गोविन्दराज जोशीको उम्मेदवारी खारेजीपछि राहत महसुस भएको हो?
प्रकाशित २८ कार्तिक २०७४, मंगलबार | 2017-11-14 19:30:51